မိုးခေါင်ရေရှားဒေသမှ အော်သံများ: သေမိန့်ကျနှလုံးသား
ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြူနှင်းများ ရစ်သိုင်းနေသည်။ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင်လည်း မြူတို့ရစ်ဆိုင်း နေပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော် သက်ပြင်းငွေ့ငွေ့ကိုချမိသည်။ ချစ်သူ့မျက်နှာသည်လည်းသိသိသာသာကြီး နွမ်းလျဖြူရော်နေ၏
“ မောင်. . . ဖြူတို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ”
ကျွန်တော့်ပုခုံးကို မှီထားရင်း ချစ်သူထံမှ အစီအစဉ်မကျသည့် စကားသံထွက်လာခဲ့ ပါသည်။ ထပ်မံ၍သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို ချမိပြန်သည်။
“ မောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဖြူရယ်၊ မောင့်မှာလည်း . လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံကထောင်ဂဏန်း
ချစ်သူ၏ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားရာမှ ဖြေလျော့လိုက်ရင်း ပြောမိသည်။ကျွန်တော့်အသံသည် ကန္တာရထဲမှ မြက် တစ်ပင်ကဲ့သို့ပင် မွဲခြောက်နေပေလိမ့်မည်။
ချစ်သူသည် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို အလန့်တကြားမော့ကြည့်သည်။
ရှေ့ဆက်မပြောနိုင်လောက်အောင်ပင် ချစ်သူကို ဆွံ့အ သွားစေခဲ့သည်။
“ ဟုတ်တယ်.. ဖြူ ၊ ဖြူ့ကို မောင် အခု ခိုးပြေးလို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ခိုးလဲ ခိုးမပြေးချင်ဘူး။ ဖြူ့ကို တင့်တောင့် တင့်တယ် ထားနိုင်တဲ့ အနေအထားအထိ မောင် ကြိုးစားချင်တယ် ။ အခြေအနေတခု ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိ စောင့်စေချင်တယ်.. ဖြူရယ်”
ချစ်သူ၏မျက်ဝန်းတွင် မျက်ရည်အချို့ ၀ဲခိုနေလေပြီ။ ချစ်သူသည် ဖြောင့်တန်းညိုမှောင်သော မျက်ခုံးလှလှတစ်စုံကို အလိုမကျဟန် တွန့်ချိုး၍ မျက်မှောင်ကုတ်ထားသည်။ ဒါ သူ စိတ်ညစ်သော အခါ ပြုတတ်သည့် အပြုအမူဖြစ်သည်။
“ ဒါပေမယ့် မောင်ရယ်… ၊ ဖြူ့အိမ်က မောင်နဲ့မှ သဘောမတူနိုင်တာပဲကို”
ချစ်သူ၏ အားမလိုအားမရ ပြောဆိုဟန်က ကျွန်တော့်ရင်ကို ပူလောင်စေလေပြီ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် မြင်းတစ်ကောင် ကဆုန်ပေါက်ပြေးသကဲ့သို့ အလွန်ဗြောင်းဆန်လျက်ရှိသည်။ ရှိုးကေ့ထဲတွင်ပြထားသော အရုပ်တစ်ရုပ်ကို ၀ယ်ယူရန်မတတ်နိုင် ၍ ငေးမောကြည့်ရသော ကလေး တစ်ယောက်၏ အကြည့်မျိုးဖြင့် ချစ်သူကို ကြည့်မိသည်။
“ ဒါဆို ဖြူက ဖြူ့အိမ်က သဘောတူတဲ့ ဥာဏ်ဝင်းထွန်းနဲ့ စေ့စပ်လိုက်ရတော့ မယ်ပေါ့။ နောက်တစ်ပတ်ဆို အိမ်လာပြီး စေ့စပ်ကြတော့မယ်။ ပြောပါဦး မောင်ရယ် ၊ မောင် ဒီလိုပဲ နေတော့ မှာလား။”
ချစ်သူက ကျွန်တော့်ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်လှုပ်ရင်း အားမလိုအားမရမေးသည်။
အားကိုးတကြီး ချစ်သူမျက်နှာ ။ ကျွန်တော့်ကို အားကိုးတကြီးကြည့်နေရှာသော ချစ်သူ မျက်နှာကို ကြည့်ရင်းအမေ့မျက်နှာ ကို ဖျတ်ခနဲသတိရမိသည်။ ဘယ်သူ့ကို ငဲ့ညှာရမည်နည်း။
ရာသီဥတုအေးစိမ့်နေသော်ငြား ချွေးစီးများ ရွှဲနစ်လာသည်။အတွေးများဖြင့်ရှုပ်ထွေးလာပြီး စိတ်မောလာကာသက်ပြင်းအလို လို တစ်ချက် ချမိပြန်သည်။
“ ပြန်ကြစို့ ဖြူ..၊ သဘက်ခါကျ တွေ့ကြဦးမယ်လေ
ကျောက်လမ်းထိပ်က အအေးဆိုင်ကိုပဲ လာခဲ့ ၊ ဖြူပြောတာ မောင်နားလည်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖြူ လည်း မောင့်အခက်အခဲကို နားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ”
ချစ်သူ၏ဆံနွယ်လေးများသည်နဖူးပေါ်သို့ ဝေ့၀ဲကျနေသည်။ အောက်နှုတ်ခမ်းကိုဖိကိုက်သည်။တစ်စုံတစ်ခု
ပြောရန်ပြင်သည်။ အတန်ကြာမှ နှုတ်ခမ်းလှုပ်ရုံ ခပ်ဖွဖွလေးပြောသည်။
“ ဖြူ……မောင်နဲ့ မခွဲနိုင်ဘူးနော်” တဲ့..............၊၊
ချစ်သူသည် ကျွန်တော့်ကို မည်မျှချစ်ကြောင်း ကျွန်တော်သိပါသည်။ မိန်းကလေးတန်မဲ့ ခိုးပြေးရန် စတင်တိုင်ပင်သည်မှာ ကျွန်တော့် နှလုံးသားကို အပ်အစင်းပေါင်းများစွားဖြင့် ထိုးဆွသလိုပင် ကျွန်တော့်ရင်ကို နာကျင်စေပါသည်။ ချစ်သူကို သနားမိသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်သည် ဆံပင်ရှည်ရှည် မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးနှင့် လှချင်တိုင်း လှနေသော ချစ်သူကို မေ့ပစ်ရန် ကြိုးစားရပါတော့မည်။
ဤသို့သော ကြမ္မာမျိုးဖန်လာမည်ကို ကြိုတင်သိခွင့်ရှိခဲ့ပါလျှင် ချစ်သူကို ချစ်ခွင့်ပန် မကြိုးစားခင်ကတည်းက ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်မိပေလိမ့်မည်။ ဖြူ့ကို ကျွန်တော် အလွန်မြတ်နိုးမိသည် ကိုတော့ ၀န်ခံပါသည်။ သို့သော်အချစ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ဘ၀ကို တည်ဆောက်ရန်ကား မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ချစ်သူကို နားလည်အောင်ရှင်းပြရပေမည်။
ကျွန်တော်သည် စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ အရောင်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ လစာကလည်း သိပ်များများစားစားမဟုတ်။ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် လောက်ငရုံသာ။ ကျွန်တော့လစာကို မှီခို နေသူက အိမ်တွင်သုံးယောက်ရှိသည်။ သွားလေသူ အဖေသည်လည်း ငွေကြေးဟူ၍ များများစားစား မချန်ထားခဲ့သောကြောင့် အိမ်၏အခြေအနေမှာ အလျင်မိအောင် ရုံသာ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် အမေ နှင့် ညီလေးနှစ်ယောက်၏မျက်နှာကို ထောက်ထားငဲ့စားနိုင်သောက်နိုင်ညှာရပေမည်။
ဒါတောင် အမေက မကျန်းမာသည့်ကြားမှ တစ်ခါတစ်ရံ စက်ချုပ်၍ စားဝတ်နေရေး အခြေအနေမဆိုးရွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် မိသားစုကို ရက်စက်စွာထားရစ်ကာချစ်သူနှင့်တစ်အိုးတစ်အိမ်ထောင်ရန်မှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်။ ဖြူ့ကိုလည်း ကျွန်တော့်ဘ၀အတွင်းဆွဲသွင်း ခေါ်ဆောင်ရန်မှာ ပို၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။
ချစ်သူသည် ကြွယ်ဝပြေလည်သောမိသားစုမှ ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲခြင်းကို သူများပြော၍ ကြားဖူးရုံမျှသာ။ ကျွန်တော့်ကို အလွန်အမင်း ချစ်သည့်စိတ်မှလွဲ၍ ကျန်တာကို တွေးတောမိသူမဟုတ်ချေ။
ချစ်သူဘက်မှ မိဘတွေကသဘောမတူနိုင်သော အခြေအနေမို့မလွဲမသွေခိုးပြေးရပေမည်။ သို့သော် ကျွန်တော့်အခြေအနေဖြင့် ချစ်သူကို မျက်နှာမငယ်အောင်ထားနိုင်ပါမည်လော။ ဖြူ့ကို ဒုက္ခတွင်း
သေချာသည်မှာ စိတ်ဆိုးသောအခါ မျက်စောင်းလှလှလေး ထိုးတတ်ကာ နှုတ်ခမ်းစူ တတ်သော ချစ်သူချောချောလေးကို မလွဲမသွေ မေ့ပစ်ရန် ကြိုးစားရပါတော့မည်။
စင်စစ်ဆိုရသော် ဆင်းရဲခြင်းသည် ချစ်ခြင်းတရား၏တစ်ပါးတည်းသောနတ်ဆိုးပင် ဖြစ်တော့သည်။
“သား …. ဘာတွေများ တွေးးနေတာလဲ သားရယ်။
ခုတလော မင်း ကြည့်လိုက်ရင မှိုင်မှိုင်တွေတွေနဲ့။ ”
အမေ့စကားသံကြောင့် ကျွန်တော့်အတွေးတို့ ပြယ်လွင့်သွားသည်။ အမေ့ကို ကျွန်တော် ပြုံးပြလိုက်သည်။
“ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ သား မနက်ဖြန် လခထုတ်မှာကို တွေးနေတာပါ ”
အမေသည် ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ အမေ့အကြည့်ထဲတွင် ဂရုဏာရိပ်၊ မေတ္တာရိပ်တို့ ယှက်သန်းနေသည်။
“ သားရယ်…. မင်းလည်း ပင်ပန်းနေရှာပြီ။ ပျော်ချိန် ပါးချိန်တောင် မရှိရှာဘူး။
အလုပ်လုပ်ရတာလည်း တော်တော်ပင်ပန်းရှာမှာပဲ။ ”
“ သား မပင်ပန်းပါဘူး.. အမေရယ် ။ အမေသာ ပင်ပန်းခံပြီး အလုပ်တွေ သိပ်မလုပ်နဲ့
ဟိုနေ့ကလည်း အပ်ထည်တွေ လက်ခံထားပြန်ပြီ မဟုတ်လား ”
ကျွန်တော့်စကားကို အမေ ပြုံး၍ နားထောင်နေသည်။ ကျွန်တော် အမေ့မျက်နှာကိုကြည့် ရင်း ချစ်သူမျက်နှာကို သတိရမိသည်။ ချစ်သူမျက်နှာသည်လည်းအမေ့မျက်နှာကဲ့သို့ပင်ကြည်လင်ဝင်းပ နေတတ် ပါသည်။ ချစ်သူရေ….. ချစ်သူကို မေ့ပစ်ရန် အတော်ခက်ပါသည်။
ချစ်သူကို မနတ်ဖြန်တွေ့သောအခါ မည်သို့နားလည်အောင် ရှင်းပြရမလဲဆိုသည်ကို ကျွန်တော်စဉ်းစားမရပါ။
အိမ်မက်ထဲမှာကဲ့သို့ပင် ချစ်သူနှင့်လက်ထပ်ခွင့်ရခဲ့သော် မည်မျှကောင်းမည်နည်း ဟု စိတ်ကူးယဉ်မိသည်။
လစာထုတ်ရက်ဖြစ်၍ အိမ်သို့စောစောပြန်လာသည်။ လစာငွေကို အမေ့ထံ တရိုတသေ အပ်နှံလိုက်သည်။ ပြီးနောက် အပြင်သွားရန် အင်္ကျီ လဲသည်။ ကျွန်တော့် ညီလေးနှစ်ယောက် အိမ်ရှေ့တွင် ဂေါ်လီရိုက်တမ်း ကစားနေသည။် သူတို့ကစားနေသည်ကို ကြည့်၍ ကျွန်တော့် ဆုံးဖြတ်ချက် ပိုမိုခိုင်မာ စေသည်။ သူတို့လေးတွေ၏ ပစ္စုပ္ပန် အတွက်ရော၊ အနာဂတ်အတွက်ပါ ကျွန်တော်သည် အကိုကြီးအဖရာ မဟုတ်ပါလား။
ကျွန်တော့်၏ လှုပ်ရှားမှုတို့သည် သွက်လက်နေသော်လည်း စိတ်ထဲ၌မူ လေးလံထိုင်းမှိုင်း နေပါသည်။ညက ရေး ထားသော စာတစ်စောင်ကို အိတ်ကပ်ထဲသို့ထည့်သည်။ ဤစာသည် နှုတ်မှ ပြောမထွက်သော စကားများကို ကျွန်တော့်ကိုယ်စား ချစ်သူကို ပြောပြပေလိမ့်မည်။
ချစ်သူနှင့်ချိန်းထားရာ အအေးဆိုင်သို့ထွက်လာသောကျွန်တော်ခြေလှမ်းတို့သည် လေးလံ နှေးကွေးနေပါသည်။ ချစ်သူသည် ကျွန်တော့်ထက်ပင် စောစီးစွာကြိုရောက်နှင့်နေသည်။
“ မောင်..…. အလုပ်က ပြန်လာတာလား။ ”
ဟု သံရှည်ဆွဲကာ အေးစက်စက်အဖြေ ပေးမိသည်။
“ မောင် ဘာဖြစ်နေတာလဲ..၊ မျက်နှာကလည်း မအီမသာနဲ့။”
ချစ်သူ၏ကြင်နာသောစကားတို့ကို နားထောင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ။ ချစ်သူကို ချစ်မိသော ကျွန်တော့်အချစ်တို့သည် မပွင့်လန်းမီ ကြွေနွမ်းခဲ့ရပြီ။ နှစ်ဦးသဘောတူ မက်ခဲ့ဖူးသော အိမ်မက်တို့သည် ပြယ်လွင့်ခဲ့ရပြီ။ ကျွန်တော့်နှလုံးသားကို လောကဓံသည် အနက်ရှိုင်းဆုံး ချောက်ထဲသို့ တွန်းချခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ယောင်္ကျားတန်မဲ့ ၀ဲလုလု မျက်ရည်တို့ကို မျက်တောင်ဖြင့် ပုတ်ခတ် သိမ်းဆည်းလိုက် ရသည်။ ထို့နောက် အိတ်ကပ်ထဲမှ စာကိုချစ်သူထံထိုးပေးလိုက်သည်။
“ မောင် ဒါ ဘာလဲ ”
“ မမေးပါနဲ့…ဖြူရယ်။ မောင်… မောင်…
ဘယ်လိုမှ ပြောမထွက်ဘူး. ၊ပြောလည်းမပြောရက်ဘူး ”
ချစ်သူသည် စာကို အလန့်တကြားယူဖတ်သည်။ စာရွက်ကို ကိုင်ထားသော ချစ်သူ၏ လက်သည် တဆက်ဆက် တုန်ရီလာသည်။
မောင်တို့ နှစ်ယောက် လမ်းခွဲကြရအောင်
ဒါပေမယ့် ဖြူ့ကို မောင် သိပ်ချစ်တယ်..
ချစ်သူမျက်နှာသည် သွေးမရှိသကဲ့သို့ ဖြူဖျော့လာသည်။ ဖိကိုက်ထားသော ပန်းနုရောင် နှုတ်ခမ်းလေးသည်တဆတ် ဆတ်တုန်ရီနေ သည်။ မျက်ဝန်းနက်နက်တွင် မျက်ရည်စတွေ ခိုဝဲလာ သည်။
“ မောင်ရယ်…အဓိပ္ပာယ်မရှိတာ။ ဖြူ ပြောပြီးပြီပဲ.. မောင် ဘယ်လို အခက်အခဲတွေရှိရှိ ၊
ဖြူ မောင်နဲ့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြူလည်း မောင့်ကို အရမ်းချစ်တယ်။
ဖြူ.. မောင်နဲ့ ဘယ်လိုမှ မခွဲနိုင်ဘူး ။ မောင်ပြတ်သားဖို့၊ သတ္တိရှိဖို့ပဲ လိုတယ်။
ဖြူ.. မောင်နဲ့လိုက်နေနိုင်ပါတယ် မောင်ရယ်၊ ဖြူ.. တို့ အတူ…တူလေ .....”
ချစ်သူအသံ တိမ်ဝင်သွားသည်။ တစ်ချက်ရှိုက်ရင်း စကားကို မရမ်းမနား တွက်တွက် ပြောနေရှာသော ချစ်သူကိုကြည့်ရင်း ရင်တွင်းဆူးနင့်သွားသည်။ ကျွန်တော့် နှုတ်ဖျားတွင် စကားများ စွံ့အ နေလေပြီ။ သို့သော် နှလုံးသား၏ ဆန္ဒကို ငြင်းဆန်ကာဦးနှောက် ၏စေခိုင်းချက် အရ စကားတစ်ခွန်းကို အားတင်း၍ ပြောရပေမည်။
“ ဖြူ… မောင့်ကို မေ့လိုက်ပါတော့…။ ”
ချစ်သူသည် ကျွန်တော့်ကို တအံ့တသြကြည့်သည်။ မိန်းမတစ်ဦးတွင်ရှိသည့် မာနကြောင့် ထင်သည်။ မျက်ရည်တို့ကို ဆတ်ခနဲ သုတ်ပစ်သည်။ မီးဝင်းဝင်းတောက်လု မျက်ဝန်းမျာဖြင့် စိုက်ကြည့် သည်။ ဒေါသကြောင့် ထင်သည်။ နှာခေါင်း ထိပ်လေးရော၊နားရွက် ကားကား ဖြူဖြူလေးပါ နီ၍ လာသည်။
“ မောင် ပြောရက်တယ်။ ပြီးတော့ မောင်ဟာ ပျော့ညံ့တယ်။ သတ္တိမရှိဘူး။
မှားခဲ့ပါတယ်။ မှားခဲ့တယ်။ ဖြူ အကြီးကြီးမှားခဲ့တယ်
မောင့်ကို ယုံကြည်ခဲ့တာ အမှားကြီးမှားတယ်။ မောင် မတရားဘူး။ မောင် လုံးဝ
ချစ်သူ၏ စကားလုံးတို့သည် ကျွန်တော့်ရင်ဘက်ကို လာရောက်ထိမှန်သည်။ ချစ်သူ၏ စကားလုံးတိုင်းသည် ကျွန်တော့်နှလုံးသား အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကို တစစီ ဖဲ့ချွေယူဆောင်သွားသည်။ ချစ်သူမျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်ရန် မ၀ံ့မရဲ။
“ကိုယ်သွားတော့မယ်… ဖြူ ”
“ နေဦး မောင်…၊ မောင့်အတွက် ပေးစရာ လက်ဆောင် ရှိသေးတယ် ”
ချစ်သူသည် ညာဘက်လက်ကို မြှောက်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်သည် ပါးတစ်ဖက်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထိုးပေးလိုက်သည်။ချစ်သူ၏ လက်ဖ၀ါးနုနုလေးကိုလည်း မနာကျင်ပါစေနဲ့ ဟုလည်း စိတ်ထဲမှ ဆုတောင်း ပေးမိသည်။
“ ရိုက်လိုက်ပါ ဖြူ..၊ ဖြူ ကျေနပ်သလောက် ရိုက်လိုက်ပါ .. ”
ချစ်သူမျက်နှာသည် အုံ့မှိုင်းပြာရီလျက်ရှိသည်။ မြှောက်ထားသောလက်ကို ပြန်ရုတ်လိုက် သည်။
“ ဖြူ …. ဖြူ….. မောင့်ကို မရိုက်ရက်ပါဘူး။ ဖြူ မောင့်ကို သိပ်ချစ်ပါတယ်။
ဖြူ့ ကြောင့်လေ… မောင် တစ်ခုခု အနာတရ ဖြစ်သွားမှာ ဖြူမလိုလားပါဘူး
ချစ်သူပြောရင်းငိုသည်။ ချစ်သူငိုသော်လည်း ချော့ခွင့်မရှိတော့ပါ။ကျွန်တော်သည် ချစ်သူကို ချစ်သူအဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်လိုက်ရပြီ မဟုတ်ပါလား….။ကျွန်တော့်ပါးပြင်သည် ပူနွေးစွက်စိုသွားသည်။ ပါးပြင်ကို လက်ဖြင့် စမ်းမိသည်။အို..ကျွန်တော့်ပါးမှာလည်း မျက်ရည်တွေနဲ့ပါလား။ မငိုမိရန် အားတင်း
ထားသော်လည်း ယောင်္ကျားတန်မဲ့ မျက်ရည်စီးကြောင်းတို့ကိုတားမရ၊၊ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ် သွားသည်။။မည်မျှကြာသည်မသိ။
“ ဖြူ . . ပြန်တော့မယ် . . .မောင် ”
နှုတ်မှ မည်သည့်စကားမှ မဆိုမိ။ ခေါင်းညိတ်မိလား၊ ခေါင်းခါမိလား၊မသိပါ။ နောက်ကျိ နေသော စိတ်သည် လူကိုပြုစားလေပြီ။နှလုံးသားတစ်စုံကို ခိုင်မြဲစွာ ရစ်ချည်ထားသောအဖြူရောင်ကြိုးတစ်ချောင်း သည် ပြေလျော့ လေပြီ။ နောက်ဆုံးကြည့်ခြင်းဖြင့် ကြည့်မိသည်။ ချစ်သူသည် မျက်ရည်တွေကြားမှ
အပြုံးတု တစ်ခုကို ချစ်သူကိုဖန်ဆင်း၍ ပြုံးပြသည်။ ထို့နောက် ချာခနဲလှည့်ထွက်သွားတော့ သည်။ ကျွန်တော်သည် ချစ်သူနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အရပ်သို့ ကျောခိုင်း၍ လျှောက်လာခဲ့သည်။
တစ်လှမ်း . . . . .။ နှစ်လမ်း . . . . . ။ သုံးလှမ်း . . . . . ။
ထို့နောက် ခြေစုံရပ်ကာ နောက်သို့ လှည့်၍ ပြန်ကြည့်မိသည်။
အို . . . ချစ်သူသည်လည်း ရပ်လျက်ပါလား။ ချစ်သူ၏ ဦးခေါင်းသည် နောက်သို့ တဖြည်းဖြည်း ငဲ့စောင်းလာသည်။ သို့သော် ရုတ်တရက် ရှေ့သို့ ပြန်လှည့်သွားသည်။ ထို့နောက် ရပ်နေရာမှ ညီညာဖြောင့်တန်းသော လမ်းအတိုင်း ဆက်၍ လျှောက်လှမ်းသွားသည်။
ချစ်သူ၏ ခြေသံတို့သည် ကျွန်တော်နှင့် တဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော့်နှလုံးသားနှင့် ဝေး၍ ဝေး၍ . . . . . .
သူဝတ္ထုကို အဆုံးသတ်လိုက်သည် ၊၊မကျေနပ်သလိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြန်သည် ၊၊၀တ္ထုထဲရှိဇာတ်ကောင်နှစ်ဦးကိုပေါင်းပေးရန် စဉ်းစားသည် ၊၊အတိတ်သည် သူ့ရင်ကိုရိုက်ခတ်လာ၏.........၊၊
အမှန်တကယ်ပေါင်းစပ်ခွင့်မရှိခဲ့သော ဘ၀နှစ်ခုမပေါင်းပေးတော့ဘဲ ဇာတ်သိမ်းကို ဒီအတိုင်းပင်ထားလိုက်သည် ၊၊ရေးပြီးသွားသောထိုဝတ္ထုတိုလေးကို အခါခါပြန်ဖတ်ရင်းအလွမ်းဆန်နေသော
ဇာတ်သိမ်းသည် သူ့ရင်တွင်းဒဏ်ရာကိုအသစ်ဖြစ်စေ၏.....၊၊ သို့သော် ပေါင်းစပ်ခွင့်ရလိုက်သော
သူလိုလူတစ်ယောက်အလွမ်းသည်သာ ထိုက်တန်ကြောင်းသူယုံကြည်မိသည် ၊၊ထို့ကြောင့် ၀တ္ထုဇာတ်သိမ်းကို မပြင်တော့ ဇာတ်ကောင်အမျိုးသားကို ကြေကွဲစွာလွမ်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတော့သည် ......................၊၊
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:44 PM
ဟင့် ဇာတ်လမ်းက ၀မ်းနည်းစရာကြီး